Muxuu ka yiri Axmed Madoobe Khilaafka u dhexeeyo Xukuumadda Somalia iyo Maamulka KMG ee Magaalada Kismaayo. – idalenews.com
Guddoomiyaha Maamulka KMG ee Magaalada Kismaayo ahn Hogaamiyaha Ururka Raaskaambooni Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa shaaca ka qaaday inuusan jirin wax Khilaaf ah ee u dhexeeya Xukuumadda Somalia iyo Maamulka KMG Kismaayo.
Axmed Madoobe, waxa uu daboolka ka qaaday inuu jiro isfahan’waa u dhexeeya Xukuumadda Somalia iyo Maamulka Kismaayo balse uusan jirin wax dagaal ah ee u dhexeeya, isagoona sheegay in Warbaahinta ku hadashay Afka Soomaaliga ay baahiyeen warar ololinaaya Siyaasadda labada dhinac.
Axmed Madoobe, waxa uu sheegay in Ciladda ay ka bilaabatay Dhismaha Maamulka Jubbaland, taasina ay isku fahmi waayeen iyaga iyo Dowladda Somalia ilaa iyo iminkana uu jiro wadahadal hoose ee u dhexeeya Labada dhinac.
Wuxuu sheegay in Khilaafka sida weyn loo hadal hayo uu yahay mid aan sidaasi ubuurneyn iyadoo uu jiro shirar kale oo ay ku madalsan yihiin madaxda Dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale masuuliyiinta horboodeysa shirka Magaalada Kismaayo halkaasi oo uu sheegay Axmed Madoobe in lagu xalinayo khilaafka yar ee iminka taagan.
Axmed Madoobe , ayaa meesha ka saaray inuu jiro Khilaaf weyn, wuxuuna ku soo celcelshay in Xukuumadda Somalia ay fiicnaan lahayd inay dib u eegto Dastuurka dalka,kaasi oo uu Axmed Madoobe ku sheegay inuu dhigaayo in nidaamka Federaalisamka uu xuriyad siinayo, sida uu hadalka u dhigay.
Si kastaba ha ahaatee, Guddoomiyaha Maamulka KMG ee Magaalada Kismaayo ahn Hogaamiyaha Ururka Raaskaambooni Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), waxa uu sheegay inuu rajo fiican ka qabo in kulanka Labaad uu ahaan doono mid kusoo idlaada Guul iyo isfahan, isagoona sheegay in Xukuumadda looga baahan yahay inay u jilicsanaato Maamulada Dalka laga hirgalinaayo, si dhismaha Dalka uu uga soo bilowdo Gobolada Dalka Somalia.